Home » Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny » Sefon'ny hotely indianina: niova ny fironana amin'ny fampiantranoana olona maneran-tany fa vetivety ihany
Ireo mpilalao manan-danja eo amin'ny tsenan'ny hotely indiana dia niara-nivory tamina hetsika mari-pankasitrahana indostrialy farany teo - nizara ny zavatra niainany izy ireo ary niresaka ny amin'ny làlana mankany aloha.
Ny fanalahidy voalohany tamin'ny andro voalohany niadian-kevitra tamin'ny mpitondra samihafa, raha fintinina dia ny indostrian'ny fandraisam-bahiny Indiana toy ny firenena maro manerantany dia manatri-maso fiovana lehibe eo amin'ny tsenan'ny tsena, ny lamin'ny mpanjifa, ny fangatahana vaovao ary ny fanatsarana ny fahasalamana sy ny fahadiovana. protocols. Ny fanamarihana ny famolavolana sy ny asany, ny fampiasana ny habaka, ny teknolojia, ny vidiny raikitra ary ny fiverenan'ny mpiray antoka dia voatonona avokoa. Mandritra izany fotoana izany dia miantoka ny indostria hijanona ho mifaninana sy mandroso. Nanaiky ny ankamaroany fa ny areti-mandringana dia nanolotra ny tombotsoan'ny hotely hanatsara sy hanamafy ny indostria ary ny tombom-barotra amin'ny fotoana maharitra.
Ny tontonana fanalahidy tamin'ny andro fanokafana dia nahitana:
🔸Prabhat Verma, filoha lefitra mpanatanteraka- Operations India atsimo sy iraisam-pirenena, orinasan-trano fandraisam-bahiny indiana (IHCL)
NAnuraag Bhatnagar, Chief Operating Officer, Leela PalacesHotels sy Resorts
🔸Zubin Saxena, Tale mpitantana sy VP Operations, Radisson Hotel Group
🔸Puneet Dhawan, Operations VP Senior-India sy Azia atsimo, Accor
AndMandeep S Lamba, filoha (Azia atsimo) HVS ANAROCK
🔸Neeraj Govil, filoha lefitra zokiolona- Azia atsimo, Marriott International
🔸Sunjae Sharma, VP Operations, Hyatt India ary Anil Chadha, COO, amin 'ny TTF Hotels
Mandeep S Lamba avy amin'ny HVS ANAROCK dia nilaza fa: "Manome toky izahay ny mpampiasa vola, ny tompona hotely, ary ny olona manandrana manao ny asany amin'ny sehatry ny fandraisam-bahiny sy ireo mpandray anjara hafa rehetra." Hoy izy: "Fahavoazana vetivety ity ary telo taona eo ho eo dia hisy fihemorana lehibe ho hitan'ny indostria."
Neeraj Govil, Marriott International dia nanambara fa, "Tao anatin'izay roa volana lasa izay, ny sehatry ny hotely dia tsy maintsy nieritreritra ny tongony ary namoaka ny hevitra ivelan'ny vavahady mba hitazomana ny fivezivezena." Nanampy izy hoe: “Nandritra io dingana io dia nanokatra fidiram-bola vaovao marobe izy ireo. Ny gamut manontolo amin'ny vidin'ny asa ankehitriny, na raikitra io, na miova dia eo ambany fanaraha-maso mafy. Ny fampidinana ny vidiny dia tsy maintsy ampiharin'ny indostria amin'ny ankapobeny na raha sahirana amin'ny lafiny ara-bola ny orinasa. ”
Anil Chadha, Hotely ao amin'ny ITC izay mamaly ny olan'ny fahasalamana sy ny fahadiovana dia nilaza hoe: "Matahotra be ny mpanjifa, mila manome toky ny mpanjifa izahay. Ny fahatsapana dia manan-danja indrindra amin'ny indostria misy antsika; tsy vitan'ny hoe esorina ny mikraoba fa ny fanahiana koa. ”